China Backpack T-B3621B Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU chakareruka chikwere chikoro bhegi
Unyanzvi: Iyo saga rekunze saizi: 32 x 17 x 46cm (L * W * H). Unogona kuiswa pasi pechigaro chekufamba nendege. Chikamu chakaparadzaniswa chemalaptop chinogona kubata kusvika 15.6 ″ laptop.Computer huru ine homwe dzakawanda mukati dzakaringana kuchengetedza zvinhu zvako zvezuva nezuva zvakarongeka. Pamberi nehomwe diki dzakanakira zvimwe zvidiki uye zvinowanzoshandiswa zvakaputirwa kuti zvive nyore kuwana. Iyo anti kubavha zipper kumashure muhomwe inogona kuchengeta zvinhu zvako zvakakosha sefoni, kadhi rebhangi.Iyo chete bhegi rekushandisa kwezuva nezuva, chikoro chepamusoro, kembasi, basa, mutyairi, bhizinesi kuenda, kufamba uye zvipo zvikuru kune wese munhu waunoda.
Dhizaini inogadzirika: Yakakwira elasticity chipanji chakakoshwa mabhanhire epafudzi neErgonomic S chimiro dhizaini, yakasununguka pamapfudzi ako kunyangwe kana uri pasi pezese mutoro. Padding kumashure dhizaini kune imwe nyaradzo. Yakapetwa palaptop / peti yepiritsi yekuchengetedza mudziyo wako mushe
Multi-functional ruzivo: Kunze USB chiteshi uye yakavakirwa mune inotsvaga USB tambo dhizaini inoita kuti iyi USB bhegi rive nyore kubhadharisa nharembozha yako pasina kutora yako simba bhengi. Back back mukwende sleeve dhizaini yekufamba bhegi inobvumira iyo inokwana pane mukwende / sutukesi kuti zvive nyore kutakura; Bhegi kadhi slot uye zuva girazi mubati dhizaini, inokodzera yako yaunogara uchishandisa zvinhu; Zipper inokiyiwa kuitira chengetedzo yakawanda
Yakagadzika yemhando yepamusoro bhegi: Campus bhegi rakagadzirwa neakakura density oxford jira, misodzi isingadziviriri uye inodzivirira mvura. Inotakurika mubato ine mbiri yakasimbiswa kusona, iri nyore uye inorema mutoro. Iyo yakapetwa mana mazino ekuputika-chiratidzo kukiya zipi inokupa iwe yakawanda chengetedzo uye zvirinani ruzivo rwekufamba.
Yechikoro laptop bhegi inogona kukushandira iwe sehunyanzvi hofisi yebasa bhegi, tetepa USB kuchaja bagpack, koreji chikoro chepamusoro chikoro chikuru chevadzidzi bhegi revakomana, vasikana, vechidiki, vakuru
Model Nhamba T-B3621B
Ruvara: Nhema nhema
Saizi: L32 * W17 * H46cm
Zvinhu: Splashproof & muva kusagadzikana 300D * 300D Oxford
Feature: Splashproof; Ne USB kuchaja; Yakapetwa kaviri zipi
Pashure: Mukwende T-B3611
Zvadaro: Bhegi T-B3639